Yini Izinhlelo Zokuxhumana Zasolwandle Ezisetshenziswayo Emkhakheni Wasemanzini？ -Industry News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Yini Izinhlelo Zokuxhumana Zasolwandle Ezisetshenziswa Emkhakheni Wezolwandle？
Isikhathi: 2020-07-08 Hits: 13
Ukuxhumana ngomsakazo olwandle bekuguqukile olwandle eminyakeni edlule. Ngemuva kwezinsuku zama-semaphores namafulegi (asasebenza nanamuhla kwezinye izimo), umsakazo waletha ushintsho olukhulu ekuxhumaneni kwasolwandle olwandle.
Kusukela eminyakeni yokuqala yekhulu leminyaka elidlule, imikhumbi yaqala umsakazo ofanelekayo wokuxhumana nezimpawu zosizi phakathi kwabo nangasogwini. I-Radiotelegraphy isebenzisa ikhodi yaseMorse yayisetshenziswa ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili kwezokuxhumana zasolwandle.
Ngokuthuthuka kobuchwepheshe bezokuxhumana ngeselula, ukuxhumana kwezasemanzini kungasebenzisanga i-radiotelegraphy kuphela kepha kubuye kwasebenzisa izingcingo ezingenazingcingo isikhathi eside. Lezi zingcingo ezingenazingcingo zisetshenziswa kabanzi koxhumana nabo bebhizinisi, zibika njalo ngemikhumbi lapho zingena khona futhi zingena nezinsuku zokuphuma, futhi zilandela imiyalo yokudluliselwa komhlaba. Abasebenza olwandle olwandle basebenzise izingcingo ezingenantambo ukuhlebezela izihlobo ezisemhlabeni olwandle olukude, okwenza impilo yasolwandle enesizungu ifudumele futhi ihleke.
Ukuxhumana ngezokuphepha bekulokhu kungukuqukethwe okubalulekile kokuxhumana kwaselwandle okwenziwa ngasolwandle. Imikhumbi ehamba olwandle ihlala ibhekene nengozi yamagagasi omoya, amadwala, izixhobo ezingashoni kanye nokushayisana kwemikhumbi. Ucingo lwasolwandle luletha ukuphepha okwengeziwe kubasebenzi.
Isimo sezulu sezulu olwandle sinokuqukethwe esisemqoka kokuxhumana zasolwandle. Ngoba izivunguvungu olwandle zibeka engcupheni enkulu imikhumbi, minyaka yonke emhlabeni, imikhumbi imile ngenxa yesiphepho. Ngakho-ke, amazwe asogwini akha inethiwekhi yezokuxhumana ngaphandle kwentambo yasolwandle, futhi ayekhipha idatha yemvelo yezindawo ezahlukahlukene zolwandle emikhunjini.
Izingcingo zasemanzini, njengezingcingo zezimoto, zifaka izingcingo ezingenawaya emikhunjini futhi zimise iziteshi eziyisisekelo ngasogwini ukuze amaza omsakazo akwazi ukumboza ugu. Ukuze wandise ibanga lokuxhumana phakathi komkhumbi nogu, isiteshi sesisekelo ngokuvamile sifakwa endaweni ephakeme kunazo zonke.
Uma olwandle olusemkhunjini efuna ukushaya ucingo nomndeni wakhe, ucingo lwasolwandle luzodlulisela amaza omsakazo esiteshini sesisekelo luze luwudlulise ngomugqa wetrunk luye ehhovisi locingo olusebenzisa umhlaba: ifoni yasekhaya ingaxhunyaniswa umugqa wehhovisi lezingcingo.
Izikejana zihlala zilayishwa ngemithwalo eningi. Lapho ungena emasikweni ezwe, isimemezelo senkambiso siyinkinga kakhulu futhi kuthatha isikhathi esiningi. Manje njengoba sinezingcingo zasolwandle, singabika uhlu lwezimpahla, abagibeli kanye nohlu lwabagibeli kulo mkhumbi ezinsukwini ezilandelwayo ngaphambi kwezinsuku ezimbalwa ngaphambi kwesiteshi somsakazo wasolwandle nemishini yomsakazo. Vele, lokhu kwenziwa ngokuxhumana kwedatha kwikhompyutha. Lapho umkhumbi ungena ethekwini, zonke izinqubo ziqedile, ezingonga isikhathi esiningi.
Okwedlule: Umbuzo onzima i-Apple engakwazi ukuwuphendula: Ngabe abantu emhlabeni bafuna i-5G ngempela?
Okulandelayo: Lapho i-Paysets Handsets Ihlangana Nobuciko Bomgwaqo